गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको युवतीलाई फोन: पानी धेरै खानु है – SaipalNews.com
काठमाडौं २७ चैत । कोरोना संक्रमण देखिएकी एक १९ वर्षीया युवती हाल धौलागिरी अस्पतालमा उपचाररत छिन् । बेल्जियमबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी उनलाई गत १५ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।संक्रमित युवतीसँग गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् ।
उनले युवतीको स्वास्थ्यअवस्था बुझ्नुका साथै विभिन्न सल्लाह पनि दिए । मुख्यमन्त्रीले बढीभन्दा बढी पानी पिउन आग्रह गर्दै रोग निको भएपछि मात्रै घर फर्किन भने । मुख्यमन्त्री र कोरना संक्रमितबीचको संवाद यस्तो थियो :
मुख्यमन्त्री : हेल्लो
युवती : हेल्लो
मुख्यमन्त्री : बोल्नुभएको हो : म मुख्यमन्त्री बोलेको क्या, पोखराबाट ।
युवती : सर नमस्ते
मुख्यमन्त्री: आरामै हुनुहुन्छ नि रु ज्वरो आएको छ कि छैन ?
युवती : छैन
मुख्यमन्त्री : ए, खोकी छ कि छैन ?
मुख्यमन्त्री : तपाईंलाई राम्रो हुन्छ क्या । नआत्तिनुहोला । डाक्टर नर्सले राम्रो हेरचाह गर्नुभएको छ ?
युवती : हजुर
मुख्यमन्त्री : पानी चैं धेरै खानुहोला । मैले डाक्टरहरुलाई पनि पानी धेरै दिनुहोला भनेको छु । उहाँहरुले तपाईंलाई पानी तताउने भाँडै दिएका छौं भन्नुभएको छ । पानी धेरै खानुपर्छ क्या ।
युवती : हवस् ।
मुख्यमन्त्री: चिसो चिज केही नखानुहोला । डाक्टरले भन्नुभएको होला नि होइन ? डाक्टर दिनमा कतिपटक आउनुहुन्छ हेर्न ? दुईपटक ?
युवती : यहाँ त आउनुहुन्न ।
मुख्यमन्त्री : कोठामा आउनुभएको छैन ?
युवती : छैन । फोनमा सोध्नुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री : तपाईं आनन्दले बस्नुहोला । आत्तिनुपर्दैन । निको हुन्छ । तपाईंको क्रिटिकल छैन क्या । तीन–चार पटक टेस्ट गर्नुपर्छ । निको भएपछि नेगेटिभ देखिन्छ । १४ दिनमा निस्कन्छु नभन्नुहोला । २/४ दिन अझै बस्नुपर्छ । पुरै रोग निख्रिएपछि मात्रै घर जानुपर्छ है बैनी ।
मुख्यमन्त्री : म दिनदिनै डाक्टरसँग कुरा गरिरहेको छु । राम्रो उपचार गर्न भनेको छु । प्रगति भइरहेको छ भन्नुभएको छ । मन दह्रो गर्नुपर्छ क्या । केही पनि हुन्न ।
मुख्यमन्त्री : भोलि पनि फेरि फोन गर्छु है । तपाईंलाई निको हुन्छ क्या ।
झन् झन् कसिदैँ नेकपाको गाँठो
एमसीसी कार्यदलद्वारा अध्ययन र विश्लेषण शुरु
पाँच लाखले पाएका छैनन् ‘स्मार्ट लाइसेन्स’